Jam wenza kusukela Mint nejusi: iresiphi
Ngokuvamile inkulumo ethi "ujamu nge Mint" is onemibuzo - ingabe lezi amahlamvu elimnandi kungenziwa kuphekwe onjalo uswidi?! Ngempela, kungenzeka. Ngaphezu kwalokho, ujamu we peppermint ne jusi, isibonelo, kuhle kakhulu empilweni, ikakhulukazi phakathi imikhuhlane. ubumnandi okunjalo silondoloza esikhathini zokucindezeleka nesasasa elula uvalo. Ukuba ukuza ekhaya ngemva kokusebenza usuku kanzima, futhi ephuza inkomishi yetiye ngesipuni kakhulu awukudla tonic, ungakwazi kwenze umoya wakho uthokoze ngomzuzwana.
angapheka kanjani ujamu Mint nejusi? Thatha 250 g ngamaqabunga amasha izitshalo elimnandi, 2 lemon esikhulu, isigamu ilitha lamanzi futhi 1 kg ushukela. amahlamvu Mint kufanele kahle wageza ngamanzi ahlanzekile, bese elomile uthathe yizicucu amancane. Lemon ukugeza futhi ikhasi ngommese obukhali usike ku cubes ezincane. Dlulisa yezingxenye ezimbili ebhodweni futhi ukupheka cishe imizuzu engu-10. Khona-ke epholile, amboze futhi uhlele isitsha esiqandisini usuku olulodwa.
Ngaphezu kwalokho esizayo ujamu lemon Mint ukuhlunga ngokusebenzisa eligoqiwe izingqimba eziningana cheesecloth futhi wring kahle. I kwaphumela Govuza ketshezi ushukela, ivuse futhi imizuzu cishe amahora 1.5-2 on ukushisa low. Ngalesi sikhathi, ungakwazi ukulungisela amabhange abilayo indlela yabo ajwayelekile. Kokuqendwa ujamu lemon Mint futhi uthele esitsheni ingilazi futhi ngokushesha usongwa.
Omama abaningi abasemakhaya ukupheka ukuminyana nge sifanamsindvo ngisho izimbali ukuthi kungenziwa esenezela wokwenziwa kweengaba zokugcina. Cabanga nje indlela ezithakazelisayo kwakuyoba bheka jar ngamunye amahlamvu elikhanyayo - ubuhle obunjalo kungenziwa kuphekwe njengesipho!
Jam wenza kusukela Mint, izithombe okuyinto ukuniqaphelisa, uba nombala isici oluhlaza, njengoba ungabona ngokwakho. Emerald aphathe kakhulu othanda bantwanyana, ubani okufanele aphathe ngokuqapha, t. Ukuze. The Mint kunomphumela tonic, futhi ngokuvamile ibangela excitability lelitfutfukile isimiso sezinzwa, ukuqwasha kanye nezinye izimpawu womsebenzi ngokweqile.
Namuhla ukupheka ujamu Mint, zokupheka okuyinto kuphakanyisiwe kulesi sihloko kungaba nezinye izingxenye. Ngokwesibonelo, ama-strawberry. Ukuze wenze lokhu, thatha 500 g ama-strawberry, ugeze khona futhi uthathe tincetu. Nge puree blender ukwakheka therefrom, engeza nalokho omunye kalamula, 300 g ushukela 100 g amacembe Mint olwembiza. Ngemva kwesigamu sehora uzobona kanjani ukuhlukanisa ijusi. Okuqukethwe uthele epanini, thumba imizuzu cishe imizuzu engu-10. ujamu Ready ezenziwe is batheleka izimbiza inzalo ngenkathi ashisayo bese livalwa ebusika.
Ukunambitheka jam siphelile ingase yehluke kuye ngesistimu zilwane, okusho ukuthi kwesinkuntshane kungaba malic, futhi peppermint ne jusi, njll Ngakho, isidlo esiphelele ngeke abe ukunambitheka ezithile luhlaza okungukuthi ngokwayo kumnandi ....: ngaso sonke isikhathi uhlale ezithakazelisayo ukuqagela ukuthi uyoba yini umphumela.
Lungiselela Mint ujamu futhi ujabulele Iphalethi ocebile flavour, kodwa konke lokhu, ungakhohlwa ukuthi lesi sidlo akuvunyelwe uma hypersensitive.
Kvass nhlama ebilisiwe: iresiphi nge isinkwa noma imifino
Juice sokovarke. iresiphi
Umdlali webhola laseJalimane webhola leKonstantin Raush
ICQ - izinhlelo Better zokuxhumana
Kungenzeka yini ukuba uqhathanise art yesimanje futhi bakudala? Ubuciko emhlabeni nezakudala